samacharpostdainik May 5, 2022
प्युठान घर भएकी उषा सुनुवाको कहानी सुन्दा कस्को पो मन थामिएला र ? जन्मिदै दुई वटा थिएनन । आमा पनि उनी जन्मेको दुई वर्ष पछि सधैँ*का लागि छो**डेर जानुभयो । आमाले छो*डेर गए पछि उषा सुनुवाले बुवाको माया पनि राम्रोसगँ पाउन सकिनन जिन्दगीभर । त्यसैले पनि होला उनलाइ अहिले जिन्दगीसगँ हारिसकेको जस्तो अनुभव हुने गर्दछ । जसोतसो पाँच कक्षासम्म अध्ययन गरेकी छिन उषा सुनुवारले ।
कहिलेकाहीँ त आफू किन जन्मिएको यस्तो अवस्थामा भन्ने लाग्ने गरेको उषा बताउछिँन । आमा बि*ते पछि उनका बुवा पनि आफुबाट भिन्दै बसेको उनी बताउछिन । बुवा फाल्टै बस्न थाले पछि आमा सगै बाबू पनि गुमा*एको जस्तो महसुस भएको उनी बताउछिँन । त्यसैले पनि होला उषा भन्छिन ` जिन्दगीसगँ त म हारिसकेको छु । ´ उनलाइ धेरै जनाले उनकै अगाडि यस्तो जन्मिनु भन्दा त बरु म*रेकै भए हुन्थ्यो या त नज*न्मिएको भए हुन्थ्यो भन्ने गरेको उनी बताउछिँन । त्यस्तो शब्दहरु आफू कहिल्यै नबिर्सिने उनी बताउँछिन ।
पाँच कक्षासम्म पढेकी उनी त्यसपछी भने पढाइ छोडिन । आफुसगँ कोहि साथी नबन्ने, बोल्न नखोज्ने, कक्षामा सगैँ बस्न पनि नमान्ने गरेको उनी बताउछिँन । मुखैले नबस्ने नभनेता पनि एउटै बेन्चीमा पर्दा आफ्नो झोला बोकेर साथिहरु अर्कै तिर बस्ने गरेको उनले बताइन । त्यही कारणले आफुलाज धेरै दु*ख लाग्ने गरेकोले पढन मन हुदाहुदै पनि पढ्न नसकेको उनी बताउछिँन । उनी अहिले मामाघरमा बस्दै आएकी छिन ।
उशाकि आमा पनि उषा जस्तै हुनुहुन्थ्यो भन्ने अफुले सुनेको उनी बताउछिन । त्यसैले सानै बाट मामाघर तिरै बाट आफुलाइ स्याहारसुसार गरेको उनीले बताइन । अहिले पनि आफुलाइ धेरै गार्‍हो हुने गरेको बताउछिन । आफू केही गर्न नसक्ने हुदाँ सधै अरुले स्याहार गर्नु पर्दा आफैलाइ दिक्क लाग्ने उनी बताउछिँन । आफ्नो यस्तो अवस्था हुदाँ आफू केही गर्न सक्छु जस्तो नलागेको उनी बताउछिँन । उनि रु***दै भन्छिन ` अहिले अलि अलि गीत गाउन जान्दछु पछि राम्रोसगँ गाउन जान्ने भएपछी गीत गाएर बा*च्न चाहान्छु ।´
आफुले अलिअलि जानेको यहि गीत गाउन हो, कसैको साथ सहयोग पाए यसैलाइ अझ राम्रो बनाउदै लान मन भएको उनी बताउछिँन । आफू संगीत सिक्न चाहेको र गीत गाएरै जीवन चलाउन चाहेको उनी बताउछिँन । राम्रो ठाउँ गएर संगित सिक्न सक्ने आर्थिक अवस्था आफ्नो नभएको उनी बताउँछिन, कसैले सहयोग गरे आफू त्यसलाइ राम्रो सग सदुपयोग गर्न सक्ने पनि उनले बताइन । (हेर्नुस उनीसगँ कुराकानीको भिडियो)
Previous: यिनै हुन् नेपाली सेनाकी एकमात्र महिला पाइलट (भिडियो सहित)
यिनै हुन् नेपाली सेनाकी एकमात्र महिला पाइलट (भिडियो सहित)
इन्द्रेणीमा आजसम्मकै क’डा प्रतिभाको पहिलोपटक पाइला, जे देख्यो त्यसैलाई गित बनाउदा सबै च’कित परे, भिडियो सहित।
बाउले मकै बारीमा, छोराले घरको चोटामा एउटै महिलालाई गर्दा रहेछन्, अब आमा भन्ने कि श्रीमती (हेर्नुहोस् भिडियो)
All mail Order Birdes-to-be 2022
How one can (Do) Buy A Partner on jetbride. com Basically Instantly